निर्मला हत्या प्रकरण : अपराध स्वीकार गरे भनिएका २ अभियुक्त घटना हुँदा कुखुरा चोरेर थुनामा ! - Purbeli News
निर्मला हत्या प्रकरण : अपराध स्वीकार गरे भनिएका २ अभियुक्त घटना हुँदा कुखुरा चोरेर थुनामा !
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २४, २०७५ समय: ७:५५:५४
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण पछिल्लो समय झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय प्रहरीले पक्राउ गरेको दुई युवा विशाल चौधरी र प्रदीप रावललाई उक्त घटना भएको बेला प्रहरी हिरासतमै रहेको भन्ने खुल्न आएपछि घटनाको अनुसन्धान र दोषी को हो भन्ने विषयमा झन् पेचिलो बनेको हो ।
निर्मला हत्यामा संलग्नताको खोजी गरे पनि अहिलेसम्म पनि पक्राउ गर्न नसक्नु र पक्राउ गरेकाहरूमा पनि प्रमाण र आधारहरू नभेटेपछि प्रहरी प्रशासन थप विवादित बन्दै गएको छ । गत साउन १० गते हराएकी निर्मलाकाे लास ११ गते भेटिएकाे थियाे । साभार: चन्द्रकान्त जोशी, न्यूज२४नेपालबाट